Wholesale Multifunctional Tende PVC Firimu Transparent Party Tende 3x6m Tende neGreenhouse | Kukunda
10-29 Zvidimbu 30-49 Zvidimbu
Iyi tende repati tende ine multifuctional tende. Iyo yakanaka kune chero zviitiko zvekunze, senge zvinoratidzwa, michato, mapato. Iwe unogona zvakare kuiisa mumashure medu sehombe, inovheneka zuva kuti ufadze mhuri yako nevashanyi. Mune additon, inogona kushandiswa sekufamba-mu greenhouse. Izvo zvese zvinoenderana newe.
3) Yakakwira mhando yakajeka uye UV inopikisa PVC firimu.
0.3mm PVC firimu
Dia 42 * 1.2 / 38 * 1.0mm kwakakurudzira simbi sepombi
Yakanakira zviitiko zvekunze, kunyanya yakakodzera kugovana masikati tii neshamwari dzako. Isina mvura uye UV inodzivirira pvc firimu uye yakasimba simbi yekuvaka furu inoita kuti iwedzere kunyaradza uye kuchengetedzeka. Zvakare, we unogona kuishandisa se greenhouse kudyara maruva, miriwo uye michero .Ungakure chero chaunoda. Iyi tende yefirimu inogona kuona kuti zvirimwa zvako zvese zvakachengetedzwa kubva kumatambudziko emamiriro ekunze senge mvura, mhepo uye chando.
Hunhu hwezvinhu zveiyi yakajeka firimu bato tende iri yepamusoro-giredhi. 38 * 1.0mm kwakakurudzira pombi yakasimbiswa, uye majoini matatu-nzira uye mana-nzira majoini ari 42 * 1.2mm akasimbisa simbi furemu chimiro, kuve nechokwadi chepamusoro kudzikama uye nemhepo kuramba kwetende rese.
Kune iyo PVC firimu, iyo ukobvu ndeye 30 waya. Iyo pvc firimu iri pachena, saka kana iwe uchienda masikati masikati mapato kana zviitiko zvemitambo panze neshamwari dzako, kwete chete iwe unogona kunakirwa nenguva inofadza, iwe zvakare iwe unogona kunakidzwa nekunaka kunze uye kupisa kwezuva.Mativi ese mapaneru etende repati anobviswa. Izvo zviri nyore zvinogona kusungirirwa nechena velcro tambo uye bungee mabhora.
Masvingo emusuwo nemusuwo zvinogona kufambiswa zviri nyore. Kune akasvetuka mabhora pane zvinongedzo zvekuwedzera kudzikama kweiyo furemu, denga uye madziro emativi akasungirirwa mufuremu nechena bungee mabhora.
Yese gumbo chubhu yakagadzirirwa hombe tsoka hwaro, iyo inogona kusimudzira kudzikama kwetende .Zvekare, gumbo chubhu yega yega ine gumbo firimu, iyo inogona kupa zvirinani kuchengetedzwa kweiyo chubhu .Tinoshandisa tambo yakasununguka kubatanidza gumbo chubhu firimu kune screws pagumbo chubhu kuti iyo firimu inokwana iyo chubhu zvakanyanya.
Pashure: Famba Mune Yehuku Imbwa Peni Mhanya Cage Coop Imba Kennel 4x3x2m
Zvadaro: 6x12m Yakajeka PVC Firimu Bato Tende Transparent Firimu Greenhouse